के गर्दै छन् पञ्चायती प्रधानमन्त्रीहरू ? | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
के गर्दै छन् पञ्चायती प्रधानमन्त्रीहरू ?
Posted on जनवरी 22, 2010 by nepalkuwait	काठमाडौं, ७ माघ
तालतालको जीवन बिताइरहेका छन् पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्रीहरू　। उनीहरू प्रायः राजनीतिबाट विरक्तिएका छन्, त्यसैले दिल बहलाउने लतमा लागेका छन्　।पञ्चायतकालका ६ प्रधानमन्त्रीमध्ये तीनजना मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरी राजनीतिबाट पलायन भएका छन् भने लोकन्द्रबहादुर चन्द पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा छैनन्　। नगेन्द्रप्रसाद रिजालको मृत्यु भइसकेको छ　। सूर्यबहादुर थापा मात्र सक्रिय राजनीतिमा छन्　।
पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीमध्ये मरिचमानले धेरै वर्षसम्म कुखुरा फार्म चलाए　। धापासीस्थित आफ्नै घरपरिसरमा उनको फार्म थियो　। तर, प्रधानमन्त्रीमा जस्तै कुखुरा व्यवसायमा पनि असफल भएपछि उनले फार्म हटाएका छन्　।
त्यसो त उनले खोलेको सेभ द नेसन पार्टीले पनि केही गर्न सकेन　। त्यसैले सबै छोडेर उनी पुराना साथीहरूसँग कोठेगफमै सीमित छन्　। कोठेगफमा पनि उनीहरूबीच कुनै योजना बन्दैन, बसिबियाँलो मात्रै हुन्छ　।
साँझमा कहिलेकाहीँ दारु खाने मरिचमान चुरोट भने निरन्तर पिइरहन्छन्, चिया पनि पिइरहन्छन्　। ‘चुरोट छाड्नैपर्‍यो भनेर डाक्टरले पटक-पटक भने, तर के गरौँ, छोड्नै सक्दिनँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासित भने　।
स्वास्थ्यप्रति उति उदासीन भने उनी होइनन्　। ‘म त योगा गर्छु, रामदेवको योगाले निक्कै फाइदा पनि भएको छ,’ उनले भने　। बाँकी समयमा उनी पत्रपत्रिका पढ्छन्, टेलिभिजन हेर्छन्　।
सूर्यबहादुर थापा पनि ८४ वर्षका भए, तर समकालीनहरूभन्दा उनी बढी फूर्तिला र सक्रिय छन्　। उनको खाना खाने स्टाइल पनि गजबको छ　। ‘वरिपरि आठ/दसजना कार्यकर्ताको मण्डली राख्ने र गफ गर्दै खाने उहाँको बानी छ, कार्यकर्ता चिया पिउँछन्, उहाँ -थापा) रमाइलो गर्दै खानुहुन्छ,’ राप्रपा नेता खेमराज पण्डित भन्छन्　। पण्डित पनि कुनैवेला थापाको खानामण्डलीका सदस्य थिए　।
खाना खाँदा थापा कार्यकर्ताहरूसँग राजनीतिक ठट्टा गर्छन्　। ‘व्यंग्य गर्दै मनोरञ्जन गर्ने र त्यही लयमा खाना खाने उहाँको अनौठो बानी छ,’ पण्डितले भने　।
जनशक्ति अध्यक्षसमेत रहेका थापा भने राजनीतिक भेटघाट र छलफलमै समय बिताउँछन्　। उनी प्रायः हरेक दिन बिहान साढे चार बजे ब्युँझन्छन् र ओछ्यानबाट निस्केपछि करिब एक घन्टा घरको कम्पाउन्डवरिपरि मर्निङवाक गर्छन्　।
‘मर्निङवाक’लगत्तै थापा आफ्नै घरसँगै जोडिएको कान्छीबहिनीको घरमा गएर चिया पिउँछन्　। बहिनीको घरैमा पत्रपत्रिका पढ्छन् र टेलिभिजन हेर्छन्　।
बहिनीको घरबाट फर्केपछि साढे एघार-बाह्र बजेतिर खाना खान्छन्　। खाना खाइसकेपछि करिब एक घन्टा सुत्छन्　। उठेपछि राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्　।
उनलाई भने सरकारले स्कर्टिङसहितको सुरक्षा दिएको छ　। कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री भएको वेलादेखि यस्तो सुविधा दिन थालिएको हो　।
लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजनीतिकभन्दा धार्मिक कार्यक्रममा बढी चासो राख्न थालेका छन्　। उनी बिहान कम्तीमा एक घन्टा पूजाआजा गर्छन् भने जोगीहरूको कार्यक्रम र संगतमा बढी नै सहभागी हुन्छन्　।
उनी राप्रपा संसदीय दलका नेता हुन्, तर राजनीतिक कार्यक्रममा खासै देखिँदैनन्　। ‘उहाँ धार्मिक कार्यक्रमतिर निकै आकषिर्त हुन थाल्नुभएको छ,’ छोरा जयन्त चन्दले भने　। जयन्त पनि राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्　।
अब राजनीतिबाट सन्न्यासै लिएर धार्मिक गतिविधिमै लीन हुने सोचाइ बनाएका छन्　। ‘राजनीतिबाट सन्न्यास लिने सोचाइ बनाएको छु, तर अझै घोषणा भने गरिहालेको छैन,’ चन्दले भने　।
सरकारप्रति चन्दको गुनासो पनि धेरै छ　। सरकारले आर्थिक व्यवस्था गरिदिएन, सुरक्षामा पनि चासो दिएन भन्ने उनको गुनासो छ　। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले आयआर्जनको काम गर्न सक्दैनन्, त्यसैले सरकारले जीवननिर्वाहको जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने　। अन्य देशमा पनि यस्तो चलन भएकोले नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ　।
७० वषर्ीय चन्द पञ्चायतकालमा दुईपटक र संसदीयकालमा दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्　। तर, अहिले हेपिएको महसुस गर्छन्　। ‘हामी त अपांगजस्तै भयौँ　। केही गर्न सक्दैनौँ　। अनि कसरी जीवनयापन गर्ने ?’ चन्दले प्रश्न गरे, ‘देशका लागि हामीले गरेको लगानीको मूल्यांकन खोइ ?’
पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये पनि थापाको सुरक्षाका लागि ‘स्कर्टिङ’ छ　। चन्द, विष्ट, गिरी र सिंहलाई त्यस्तो व्यवस्था छैन　। त्यसमा पनि चन्दको गुनासो छ　। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षाको जिम्मा त राज्यले लिनुपर्ने हो, तर यहाँ त अनुरोध गर्दा पनि पाइएको छैन,’ उनले भने　। कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री भएको वेला फोन गरेर स्कर्टिङ पठाइदिन्छु भनेको तर कहिल्यै नपठाएको पनि उनले बताए　।
आठ महिनाअघि मण्डिखाटारमा घर किनेरै बसेका डा. तुलसी गिरी मिडियाको सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन्　। शाहीकालीन मन्त्री टंक ढकालको सहयोगमा नयाँ पत्रिकासँग सम्पर्कमा आएका गिरीले सुरुमा सरकारसँग आक्रोश पोखे　। उनलाई पनि चिन्ता सुरक्षाकै रहेछ　। ‘के हामी पूर्वप्रधानमन्त्री होइनौँ ? राज्यका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र म बरारबर हौँ,’ उनले भने, ‘तर यो भेदभाव किन ? सरकारले अझै पनि सक्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको सुविधा र सुरक्षा मलाई पनि देओस्　।’
श्रीमती सहाना योञ्जनसँग बस्दै आएका डा. गिरी अब भारत नजाने बताउँछन्　। ‘म किन भारत जाने ? नेपालमै बस्छु,’ गिरी भन्छन्　।
राजाको प्रत्यक्ष शासनमा उपाध्यक्ष बनाउन उनलाई बेंग्लोरबाट बोलाइएको थियो　। पञ्चायतकालमा पनि उनी ०३० देखि ०३२ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए　। तर, राजतन्त्र जोगाउने उनको पछिल्लो प्रयास असफल भयो　। ‘राजा आफैंले खुट्टा कमाए, हामीले थेगेर के गर्नु ?’ उनी कोठेगफमा यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन्　। गफमा शाहीकालीन मन्त्री र पूर्वअञ्चलाधीशहरू पनि हुन्छन्　। शाहीकालीन मन्त्रीहरूमा पनि टंक ढकाल गिरीका सबैभन्दा नजिकका मान्छे हुन्　।
तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा भने गिरी कतै देखिँदैनन्　। पूर्वराजासँग पनि उनको भेट हुँदैन　।
८५ वर्षका गिरीको बिहान उठ्नेबित्तिकै व्यायाम, योगा गर्ने र पत्रपत्रिका पढ्ने बानी छ　। निकट स्रोतका अनुसार मण्डिखाटारको घर बेचेर बुढानीलकण्ठमा किन्ने तयारी भइरहेको छ　।
पञ्चायतका अर्का प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट त नामी जुवाडे हुन्　। ‘पार्टनर’ पाउनेबित्तिकै उनी जुवामा नारिन्छन्　। देवकीनन्दन सुरेखा उनका ‘पार्टनर’ हुन्　। एक जमानामा पूर्वअञ्चलाधीश जनकबहादुर शाह उनका ‘पार्टनर’ थिए　। ‘अहिले पार्टनर घटे, उमेर बढ्यो, त्यसैले खेल पनि कम भएको छ,’ उनको पारिवारिक स्रोतले भन्यो　।
विष्ट अहिले पनि हरेक दिन ‘मर्निङवाक’ गर्छन्　। ज्ञानेश्वरबाट रातोपुल, गौशाला हुँदै पशुपति मन्दिर पुगेर र्फकंदा उनलाई डेढ घन्टाजति लाग्छ　।
८४ वषर्ीय विष्ट बूढो भएकाले राजनीतिबाट टाढिएको बताउँछन्　। ‘यो उमेरमा म के गर्न सक्छु र ? तैपनि आफ्ना विचार त व्यक्त गरिरहेको छु,’ उनले भने　। पेटको क्यान्सरबाट पीडित उनी केही समयअघि मात्र घर फर्किएका हुन्, उनको औषधि चलिरहेको छ　।
सुरक्षा र सुविधा नदिएकोमा विष्ट पनि सरकारसँग आक्रोशित छन्　। ‘हामीलाई जस्तो विभेद र अन्याय तपाईंले कहीँ देख्नुभएको छ ? पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री भनेर यस्तो विभेद गरिएको हो, तर प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री नै हो नि,’ उनको भनाइ छ　।
फरक-फरक प्रधानमन्त्रीलाई फरक-फरक सुविधा
पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीलाई राज्यले फरक-फरक सुविधा दिएको छ　। पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये सूर्यबहादुर थापाले बहुदलकालीन प्रधानमन्त्रीसरह सुविधा पाएका छन् भने अरूले पाएका छैनन्　।
सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सरकारी गाडी र गाडीका लागि तेल सुविधा पाएका छन्　। यी दुई प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ　। थापाका सुरक्षाकर्मीको गाडीका लागि महिनाको सय लिटर थप तेल उपलब्ध गराइन्छ　। तर, थापालाई स्कर्टिङको सुविधा छ भने चन्दलाई त्यो सुविधा छैन　।
पञ्चायतकालीन दुईजना प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरीले राज्यबाट गाडी र सुरक्षाकर्मी केही पनि पाएका छैनन्　। मरिचमान सिंहको सुरक्षाका लागि भने असईको नेतृत्वमा चारजना प्रहरी खटाइएको छ　। उनलाई अन्य कुनै सुविधा छैन
मन्त्रिपरिषद्को १६ मंसिरको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीको सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न गृहसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ, कार्यदलले काम सकेको छैन　।
गृह मन्त्रालयको शान्ति-सुरक्षा शाखाका उपसचिव एकमनि नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सुरक्षाको माग गरे वा उनीहरूप्रति खतरा रहेको सूचना पाएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिने बताउँछन्　। ‘तर सुरक्षा चाहियो भने त उनीहरूले पनि माग गर्नुपर्‍यो नि,’ नेपाल भने　।
सुरक्षाको स्थिति हेरेर फरक-फरक व्यक्तिलाई फरक-फरक सुरक्षा दिनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ　। ०४६ सालपछिका सबै प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा दिइएको तर त्यसअघिकालाई अवस्था हेरेर मात्र व्यवस्था गर्ने उनले बताए　।
Filed under: समचार « विदेशीलाई पासपोर्ट बाँडेको रहस्योद्घाटन / परराष्ट्रका सुब्बा पक्राउ जीवन धान्न मृगौला बिक्री »